Mgbawa nke abụọ kọrọ na ọdụ ụgbọ elu Kabul mgbe mmadụ 13 nwụrụ na bọmbụ mbụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Mgbawa nke abụọ kọrọ na ọdụ ụgbọ elu Kabul mgbe mmadụ 13 nwụrụ na bọmbụ mbụ
Akụkọ ọgụgụ isi apụtala n'isi izu a ịdọ aka na ntị maka mwakpo ndị na-eyi ọha egwu "dị nso" na ọdụ ụgbọ elu Kabul site n'aka ISIS-K-onye Alakụba Alakụba na Afghanistan.
Ihe mgbawa na -atụ ọdụ ụgbọ elu mba Kabul Hamid Karzai.
Ihe mgbawa ndị a yiri ka ọ bụ mwakpo ogbunigwe.
Dị ka ndị Taliban si kwuo, mmadụ 13 nwụrụ na mgbawa mbụ.
Mwakpo ogbunigwe abụọ dị nso na ọdụ ụgbọ elu Kabul taa kpatara “ọtụtụ ndị US na ndị nkịtị”, Pentagon kwuru.
Mgbawa gbawara taa taa n'akụkụ ọnụ ụzọ Abbey nke Kabul Hamid Karzai International Airport Ngalaba Nchedo US Onye ode akwụkwọ mgbasa ozi John Kirby, onye kwuru na mgbawa ahụ butere "ọnụọgụ ndị nwụrụ na -amaghị."
Dị ka ọnụ na -ekwuchitere ndị Taliban si kwuo, mwakpo ogbunigwe nke gburu onwe dịkarịa ala gburu mmadụ 13, gụnyere ụmụaka na ndị nche Taliban.
A kọpụtala ogbunigwe nke abụọ na mpaghara Baron Hotel dị nso na ọdụ ụgbọ elu Kabul mgbe nnukwu mgbawa gbawara ka mwepu agha na -aga n'ihu.
N'oge na -adịghị anya tupu mgbawa nke abụọ, onye nnọchi anya France na Afghanistan dọrọ ndị nkịtị aka na ntị ka ha "kpuchie" site n'ọnụ ụzọ gaa ọdụ ụgbọ elu Kabul, na -ekwu na ogbunigwe nke abụọ nwere ike ịbịaru nso mgbe ekwenyechara akụkọ banyere nnukwu mgbawa ka mwepụ ndị agha na -aga n'ihu.
Onye nnochite anya David Martinon tweetedị ịdọ aka na ntị "ngwa ngwa" nye "ndị enyi Afghanistan niile" na Tọzdee, na -adọ aka na ntị na "mgbawa nke abụọ ga -ekwe omume." Ndị ọrụ US ekwuola na mgbawa nke mbụ nwere ike bụrụ ọrụ onye na -egbu onwe ya na mpụga ọdụ ụgbọ elu.
Ọnọdụ dị na ọdụ ụgbọ elu mba Hamid Karzai adịla ọgba aghara tupu mgbawa ahụ, ebe puku kwuru puku ndị Afghanistan, ndị America na ndị ọzọ na -achọ ụzọ isi pụọ na mba ahụ tupu oge ngwụcha August 31st.